केपी ओली एमालेको अध्यक्षमा नउठ्ने ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
केपी ओली एमालेको अध्यक्षमा नउठ्ने !
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबै प्रकारका राजनीतिक माहोल तताउन माहिर छन् । उनी आफ्नो आन्तरिक पार्टी होस् या अन्य कुनै समारोह, हरेक ठाउँको सहभागितालाई हास्यमय बनाउँछन् । उनका कतिपय कुरा अपत्यारिला पनि लाग्छन् । यस्तै एउटा माहोल बनाए काठमाडौंमा मंगलबार ओलीले ।
ओलीले मंगलबार काठमाडौंमा सञ्चार संस्थाहरुका सम्पादकहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा आफूले पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उठ्ने नउठ्ने टुंगो गरिनसकेको बताएर माहोल तताइदिए । महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेद्वारी दिने कि नदिने भन्ने बारे आफूले निर्णय गरिनसकेको भनाई ओलीको थियो ।
‘मैले अहिलेसम्म उठ्ने नउठ्ने टुंगो गरिसकेको छैन, ओलीले भने, मैले उठ्ने निर्णय गरेँ भने मलाई सर्वसम्मत छोड्न पनि पाइन्छ, नभए उठ्न पनि पाइन्छ। मैले कसैलाई नउठ भन्ने कुरा हुँदैन।’
वर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएर चुनौती दिएको बारेको प्रसंगमा ओलीले त्यसलाई चुनौती भन्न नमिल्ने बताए । मलाई भीम रावलले चुनौति दिनुभएको होइन, सुझाव दिनुभएको हो । आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनुभएको छ। बढी खट्नुभएको छ, थकाइ लाग्या होला आराम गर्नुहुन्छ कि १ म उठ्छु भन्नुभएको हो।ु
तपाईको मनले खाएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव को हो ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले भने, जो निर्विरोध निर्वाचित हुन्छ अथवा सर्वाधिक भोट ल्याएर चुनाव जित्छ उही मेरो मनले खाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७८, मंगलबार ६ : ५९ बजे